भीम रावललाई सूर्य थापाको प्रश्नः कमरेड, “राष्ट्रवाद”काे बहसमा बुझेर नै उत्रिनुभएकाे हाे त ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
भीम रावललाई सूर्य थापाको प्रश्नः कमरेड, “राष्ट्रवाद”काे बहसमा बुझेर नै उत्रिनुभएकाे हाे त ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ पुष सोमबार २२:१२
“राष्ट्रवाद”काे बहसमा बुझेर नै उत्रिनुभएकाे हाे त ?
पार्टीले तपाईका कविताबमाेजिम चलिदिनुपर्ने कि कसाे हाे ? यी दुई कविताकाे “पुरानाे” र “नयाँ कवि” तपाईं नै हाे भन्ने विश्वास नलागेर नै सार्वजनिक खपतका लागि यहाँ दुबै कविता प्रस्तुतसम्म गरिएकाे जानकारी अनुराेध छ ।
म पुरानाे लिम्पियाधुरा लेख्ने कविकाे हिमायती हुँ। तर स्थायी कमिटीमा सुनाएर सार्वजनिक गरिएकाे कविता भने तथ्यकाे भ्रष्टीकरण, भ्रमकाे पुलिन्दा र अात्मनिन्दा एवं भ्रत्सनाकाे मजाकपूर्ण दृष्टान्तबाहेक अरू केही हाेइन र हुन पनि सक्दैन । तपाईका यताका अन्तर्वार्ता, प्रस्तुति र यावत् पक्षले क्रमश: पापराजीकाे फन्दामा उहिले डायना परेजस्ताे/वा अाज तपाई परिरहेकाे अनुभव भइरहेकाे छ । याे नबुझेर वा नजानेर त पक्कै गर्नुभएकाे हाेइन हाेला ? एक्लाे “बृहस्पति” बन्न नखाेज्नु नै हितकर हुन्छ हाेला !
तपाइकाे अाजकाे बाेली, धारणा र अभिव्यक्ति नेकपाकाे संस्थागत निर्णय, धारणा र निर्देशन कदापि हाेइन र मान्न सकिदैन। सकिदैन । कमसेकम अाफूले टेकेकाे धर्ती र अाफ्नाे टाउकाेले खामेकाे अाकाश मात्रै थाम्न खाेज्नु उचित हाेला कि ! विषयकाे संवेदनशीलता र गंभीरता बिर्सेर फर्किने ठाउँ नै नराखी अाफू अनुकूल अपव्याख्या गरेर बहकिनु उचित हाेइन । अागे कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्दि !!